सबैको मन छुने मकै बिक्रेता, पोलेको मकै किन्न आएकी केटिले भनिन…
मकै बिक्रेता, पोलेको मकै किन्न आएकी केटिले भनिन् एउटा मकै को कति पर्छ ? मकै बिक्रेताले जवाफ दिए- एउटाको १० रुपैया ! केटिले- भनिन् मलाई १५ रुपैयाँमा दुईवटा मकै दिनुहोस् ! बिक्रेता- बिहान देखि एउटापनी बिक्री भको छैन ठिक छ १५ रुपैया मा २ वटा मकै लानुहोस् ! केटीले चिठ्ठा परेको जसरी खुशी हुदै मकै लिएर आफ्नो पार्क गरेको गाडी तर्फ लागिन ! र एउटा मकै साथिलाई दिइन् र एउटा आफैंसंग राखिन र भनिन १० रुपैयाँ गोटा भन्दै थ्यो १५ मा दुईवटा ल्याकी छु ! बाटोमा एउटि बजै ले पोलेर ठिक्क बनाएर दिनुभयो ।
मैले पनि २० रुपैया को मकै १५ मा लिएर आएकी छु मज्जाले खानुपर्छ । अझ भोलि त १० मा दुई ओटा लिने हो । मकै बिग्री भएको छैन मज्जाले दिनुहुन्छ । ती दुबैजना केटिहरु नजिकैको रेस्टुरेन्टमा गए खानेकुरा (खाजा) अर्डर गरे आधा खाए आधा त्यही पेल्टमा छाडेर काउन्टरमा गए र बिल बुझाए बिलमा ४५० थियो ५०० दिए र ५० टिप्स राख्नु भन्दै केटिहरु त्यहाँबाट हिंडे ! एस्टुरेन्ड को मानिस पनि टिप्स दिँदा खुसी भएको थिएन ।
धनी रेस्टुरेन्ट मालिकको लागि ५० रुपैयाँ टिप्स सामान्य थियो ! तर ति मकै बेच्ने वालाको लागि ५ रुपैयाँ नै ठूलो ! गरिब किसानको मकै किन्दा ५ रुपैयाँ कममा मकै पाउदा संसार नै जितेको महसुस गर्ने अनि धनी रेस्टुरेन्ट वाला लाई टिप्स दिनै नपर्ने ठाउँमा किन यति धेरै उदार ? कतै तपाई हामीबाट पनि सडकमा मकै, तरकारी, फलफुल इत्यादी किन्दा यस्तै व्यवहार त भईरहेको छैन ? समाजिक सन्जालबाट फेसबुक बाट हामिले लिएको ।